As criminals used to commit more crimes to cover-up their crimes, Min Aung Hlaing is reusing his TERRORIST Ma Ba Tha and CRIMINAL 869 to startanew wave of Anti-Islam Activities | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeAs criminals used to commit more crimes to cover-up their crimes, Min Aung Hlaing is reusing his TERRORIST Ma Ba Tha and CRIMINAL 869 to startanew wave of Anti-Islam Activities
As criminals used to commit more crimes to cover-up their crimes, Min Aung Hlaing is reusing his TERRORIST Ma Ba Tha and CRIMINAL 869 to startanew wave of Anti-Islam Activities
Ms. Yanghee Lee is going to Myanmar and the CRIMES of Myanmar Military would be exposed.
US official (Tom Malinowski, the State Department’s human rights chief) : In Myanmar crackdown, abuses appear ‘normal’ @ http://www.chicagotribune.com/…/sns-bc-us–united-states-my…
So as criminals used to commit more crimes to cover-up the crimes, Min Aung Hlaing is reusing his TERRORIST Ma Ba Tha and CRIMINAL 869 to startanew wave of Anti-Islam Activities.
Abuses appear “normal and allowed” in Myanmar’s response to an armed uprising by Rohingya Muslims,asenior U.S. official said in an interview, castingapall over one of President Barack Obama‘s legacy foreign policy achievements.
← ICC should issue Interpol Arrest Warrant to Min Aung Hlaing for this latest crime YMCA ရှေ့မှာ တမန်တော်နေ့ အခမ်းနားမလုပ်ဖို့ သုစိတ္တ ဦးဆောင်တဲ့ မျိုးချစ်သွေးကွန်ယက်အဖွဲ့တွေ ဝိုင်းနေပြီလို့ သိရပါတယ်
ဗမာ စစ်တပ်ဟာ…..သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ…ဖုန်းကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်ရာဇဝတ်မှုကြီးတခုကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကျူးလွန်ဖို့ စီစဉ်နေပြီ. – အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေဗျာ ရှုးတိုက်လိုက်တဲ့…..သန်းရွှေ…သိန်းစိန်….မင်းအောင်လှို င်တို့ကို တိုက်ကြ… တရားခံ အစစ်က…စစ်အုပ်စုဘဲ →
One thought on “As criminals used to commit more crimes to cover-up their crimes, Min Aung Hlaing is reusing his TERRORIST Ma Ba Tha and CRIMINAL 869 to startanew wave of Anti-Islam Activities”
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း ခွင့်ပြုထားတဲ့ မြန်မာ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဟု ဆို
မြန်မာနိုင်ငံက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာ သမားရိုးကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လို ဆက်လက်လုပ်နေခြင်းကြောင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပုံရတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး Tom Malinowski က AP သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် နိုင့်ထက်စီးနင်းပြုမူနေပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ သူတို့လုပ်နေကျ ခွင့်ပြုချက် ရထားတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တာမို့ အခုလို သူတို့ကိုယ်တိုင် Video ရိုက်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တခါ တချိန်က အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင် အမေရိကန်က ကူညီပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ သူ့ရဲ့အကြံပေးတွေက ပြောနေပေမဲ့ ခုလိုလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုမှာ ထောက်ပြစရာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။